Iiflethi ezincinci kwiziko laseCampodoro
Campodoro, Padova, Italy
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLuca Marcon
Amagumbi amabini amancinci kumbindi weCampodoro (PD) alungele ukutyelela ePadua (15 KM) kunye neVicenza (15 Km), iikhilomitha ezi-3 ukusuka kwi-A4 Grisignano di Zocco (VI) indlela yokuphuma. Ifikeleleka kuphela ngemoto. akukho nxibelelwano nebhasi okanye uloliwe.
Ukuchongwa M0280180002 Reg. Veneto Region n 2 of 10/09/2019 '' Iindawo zabakhenkethi ''
Indlu enefenitshala encinci kumbindi weCamporo. Umgangatho wesibini. Ukulungele ukuhlala okufutshane ukuxhasa imiboniso yezorhwebo (i-Padua - i-Vicenza - i-Piazzola sul Brenta - i-Cittadella - i-Camisano Vicentino) kunye nohambo oluhamba nge-''Ostiglia '' indlela yokujikeleza eqala ukusuka eCampodoro kwaye ifike eTreviso. Umoya womoya kunye nokufudumeza, igumbi lokuhlambela elizimeleyo. Amagumbi okulala aneebhedi ezimbini kunye nekhitshi, i-terrace ekhululekile. Asixhotyiselwanga ukuhlalisa izilwanyana. Thula ukusuka ngo-10pm ukuya ku-7.30am, musa ukurhuqa izitulo. Kuphephe ingxolo enkulu okanye umculo nasemini. Isignali ye-wifi yenethiwekhi yoluntu ifika kwindawo yokuhlala. Ukufikelela kufuneka ube ugunyazisiwe. Ndingakunika imiyalelo malunga nendlela yokwenza oku kodwa andinaxanduva ngokusebenza kwenkonzo.
Indlu enefenitshala encinci kumbindi weCamporo. Umgangatho wesibini. Ilungele ukuhlala okufutshane ukuxhasa imiboniso (i-Padova - i-Vicenza - i-Piazzola sul Brenta - i-Cittadella - i-Camisano Vicentino) kunye neehambo ngendlela yomjikelo `` Ostiglia '' ebaleka isuka eCampodoro kwaye ifike eTreviso. Umoya womoya kunye nokufudumeza, igumbi lokuhlambela. Amagumbi okulala aneebhedi ezimbini kunye nekhitshi, i-terrace ekhululekile. Asixhotyiselwanga ukuhlalisa izilwanyana. Thula ukusuka kwi-22.00 ukuya ku-07.30, ungarhuqi izitulo. Yiphephe ingxolo okanye umculo ongxolayo emini. I-Wifi efulethini iza nethoni kwinethiwekhi yoluntu. Ulwazi lokungena kufuneka ufake isicelo sokuvunywa. Ndinganikeza imiyalelo yokwenza kodwa andinaxanduva lokusebenza kwenkonzo.
4.54 ·Izimvo eziyi-35
4.54 · Izimvo eziyi-35
Umbuki zindwendwe ngu- Luca Marcon
Ndiyakwazi ukukunceda ukhethe iindlela zokuhamba kwizixeko zaseVenice, ePadua, eVicenza. Iindlela zokuhamba ngebhayisikile kunye nohambo kwi-Ostiglia cycle path.
Ndingakunceda ucwangcise utyelelo kwisixeko saseVenice, ePadua, eVicenza. Ukutyelelwa ngebhayisekile kwindlela yebhayisekile yaseOstiglia
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$95